एक रूपैयाँ बढी भाडा लिए पनि यी नं. हरुमा फोन गर्नुहोस् – Gandaki Media
Posted on October 1, 2018 Author By admin	Comment(0)
१५ असोज । सार्वजनिक यातायातमा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिए गाडी नम्बरसहित उजुरी गर्न यातायात व्यवस्था विभागले आह्वान गरेको छ ।
विभागले गत असोज ७ गते सार्वजनिक यातायातमा १० प्रतिशत भाडा बढाएको थियो । बढेको भाडाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा चार किमिसम्मको भाडा १४ रुपैयाँ तोकिएको छ । पाँच किमीसम्म १६, छ किमिसम्म १७, आठ किमिसम्म १८, १९ किमिसम्म २६ र १९ किमीभन्दामाथि २७ रुपैयँ भाडा निर्धारण गरिएको छ ।
‘अनुगमनका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि रहेको समूह परिचालन गरिनेछ, अनुगमनका क्रममा बढी भाडा लिएको पाइएमा कानून बमोजिम कारवाही हुनेछ’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने ।
‘उजुरी त हात्तीको देखाउने दाँतमात्रै’
तोकेभन्दा एक रुपैयाँ मात्र बढी भाडा लिए पनि पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने विभागले जनाएको छ । सार्वजनिक यातायातको सुधार अभियन्ता रामबहादुर थापा विभागले बढी भाडा लिनेका विरुद्ध निस्सासहित उजुरी गर्ने व्यवस्था गरेको तर टिकट नदिने भएकाले कारवाहीको कुरा हात्तीको देखाउने दाँतमात्र हुने बताए ।
‘विभागका कर्मचारी यातायात व्यवसायीको प्रभावमा परी भाडा बढाउन मात्र लाग्छन्, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन एवं नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसार टिकट दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन ध्यान दिँदैनन्, विभाग यात्रु भन्दा व्यवसायीका पक्षमा काम गर्छन्, परिचालकलाई अनुमति पत्र एवं परिचय पत्र दिनेतर्फ पनि विभागको ध्यान जान सकेको छैन’ उनले भने ।
उजुरी गर्दा सुनुवाई गरेको गुनासो
नेपाल मेडिकल कलेजबाट गौशाला हुँदै पुरानो बसपार्कतर्फ आइरहेको बा १ ज ५७६२ नं. को माइक्रो बसले यात्रु गिरेन्द्रप्रसाद शर्मासँग सोमबार बिहान बढी भाडा लियो । विभागको वेवसाइटमा उल्लेख गरिएको सूचनाआनुसार शर्माले ट्राफिक प्रहरीको १०३ नं. मा फोन गरे । फोन उठाएका विशाल खत्रीले रुखो स्वरमा कुरा गरी उजुरी दिन हतोत्साहित बनाएको उनले गुनासो गरे ।
‘विभागको वेभसाइटमा राखिएको सूचना अनुसार चार किमिसम्मको भाडा १४ रुपैयाँ हो, गौशालाबाट म चढेँ, कमलपोखरी आइपुगेपछि परिचालकले भाडा मागे, मैलै १४ दिएँ, भाडा १८ रुपैयाँ हो भन्दै दुर्व्यवहार गरे’–उनले भने ।
विद्यार्थी, वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग लगायतको सहुलियत परिचालकले नदिए पनि उजुरी गर्न सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरिएको छ । विभागले यसपछिको भाडा समायोजन भने इन्धनको मूल्यमा पाँच रुपैयाँले घटबढ भएपछि गर्ने जनाएको छ । यसअघि सरकारले २०७२ माघ २४ गते लागू गरेको भाडादर पनि लागू भएको थिएन ।
श्रेयाको बलात्कारपछि हत्या गर्ने कुशुम को हुन् ?
पोखरा, असोज १० । पोखरा २२ पुम्दीभुम्दीकी १० वर्षीया बालिका श्रीया सुनारको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा उनकै छिमेकी पक्राउ परेका छन् । घटनाको २४ घण्टाभित्रै प्रहरीले मंगलबार राति २७ वर्षीय कुसुम पौडललाई पक्राउ गरेको हो । कुसुम सहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेकोमा पौडेल मात्र दोषी देखिएका छन् । कास्की प्रहरीका अनुसार पौडेलले घटनामा संलग्न भएको […]
Posted on December 21, 2018 Author By admin
प्रहरी प्रधान कर्यालयले ५ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को सरुवा गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेका एसपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय महानिरीक्षकको सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) का प्रवक्ता जीवनकुमार श्रेष्ठलाई सिरहा, डम्बर विकलाई धादिङ, राजन अधिकारीलाई सुनसरी र लोकेन्द्र श्रेष्ठलाई मकवानपुरमा सरुवा गरिएको छ। त्यसैगरी शेखर कोइराला ट्राफिक निर्देशनालय र ध्रुवराज […]
नेपाल प्रहरीमा खुल्याे नयाँ भर्ना : कसरी दिने दरखास्त ?